အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၇) – For her myanmar
Posted on April 29, 2019 Author For Her Myanmar	Comment(0)
ပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဧကနှင့် ဟန်နီ၏ ဆက်ဆံရေးသည် အရင်တုန်းကလိုပဲ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေပြေရှိခဲ့သည်။ ဧကကလည်း ဟန်နီ့ကို ဂရုတစိုက်ရှိပြီး ဟန်နီကလည်း ဧက မကြိုက်သည့်ကိစ္စများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ယမုံကတော့ ဟန်နီ့ကို တားမရသည့်အဆုံး အနီးကပ် စောင့်ကြည့်၍သာ နေတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ သာမန်ပုံစံအတိုင်း ဖြတ်သန်းနေရင်း တစ်နေ့တွင် ဟန်နီ့ရှုတင်ရှိသည့်နေရာသို့ ဧက ကရောက်လာခဲ့ပြီး ရှုတင် break သည့်အချိန်ထိ စိတ်ရှည်စွာ ထိုင်စောင့်နေခဲ့သည်။
“ကို ရုတ်တရက်ကြီး ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ”
“လာမယ့် စနေနေ့က ကို့ မွေးနေ့… အဲ့ဒီနေ့ကျရင် ကို သွားနေကျ မိဘမဲ့ဂေဟာကိုသွားပြီး မွေးနေ့အလှူလုပ်မယ်.. အရင်နှစ်တွေကတော့ တစ်ယောက်တည်းသွားနေကျပဲ.. အခုတော့ ဟန်နီနဲ့သွားချင်တယ် အဲ့ဒီနေ့ကို schedule လေးရှင်းပေး ထားဖို့””
“အင်း အဲဒီနေ့က… ခဏလေးနော်”
ဟန်နီကထိုင်နေရာမှ ယမုံအနားကိုသွားပြီး စနေနေ့ schedule ကိုမေးကြည့်လိုက်သည်။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၅)
“စနေနေ့က campaign တစ်ခုအတွက် သွားပေးစရာရှိတယ် ဒါပဲလေ ဘာလို့လဲ”
“အဲဒါကို cancel လုပ်ပေးလို့ရမလား ယမုံ… အဲဒီနေ့က ကို့ မွေးနေ့လေ သူနဲ့သွားစရာလေးရှိလို့”
ယမုံက ဧက ကိုလှမ်းကြည့်၍ မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး..
“ဟန်နီ နင်သူ့အတွက် အလုပ်ကို ထိခိုက်ခံတော့မလို့လား…. campaign က တစ်နေ့လုံးမဟုတ်ဘူးလေ.. မနက်ပိုင်းလေးပဲကို ပြီးတော့မှ သွားလို့မရဘူးလား”
“အဲဒါဆို နောက်ကျသွားမှာစိုးလို့ပါ။ သူ့မွေးနေ့ဆိုတော့ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးမလိုလေ.. နော်.. ယမုံ နော်… ”
“မွေးနေ့မဟုတ်လည်း နေ့တိုင်း စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးနေရတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား? နင်သူမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေ သတိထားပြီး ရှောင်နေတာ ယောက်ျားလေး အနုပညာရှင်တွေကို အရင်ကထက်ဝေးဝေး နေနေတာ ငါမသိဘူးများ မှတ်နေလား… နင့်အလုပ်ကိုတော့ အထိခိုက်မခံစေချင်ဘူး။ campaign ပြီးမှသွားမယ်လို့ နင်သွားညှိလိုက်ပါ။ နင်ရအောင် မပြောရင်ငါလိုက်ပြောမှာနော် အဲ့ဒီကျရင် ပြဿနာ အကြီးကြီးတက်လိမ့်မယ်”
“အေးပါ အေးပါဟာ… ငါပဲသွားပြောလိုက်ပါ့မယ် နင်ဒီမှာပဲနေပါ”
ဟန်နီက ဧက အနားကို ပြန်သွားပြီး…
“ကို အဲ့ဒီနေ့ကျရင် မနက်ပိုင်း campaign တစ်ခုသွားပေးဖို့ရှိတယ် အဲဒီကနေအပြန် ကို နဲ့အတူတူ မွေးနေ့အလှူ သွားလုပ်မယ်လေ”
“ဒါဆိုရင် အပြန်နောက်ကျလိမ့်မယ်နော် ဟန်နီ”
“ဒီတစ်နည်းပဲရှိတယ် ကိုရဲ့… မနက်ပိုင်း အစီအစဉ်က ဖျက်လို့မရဘူး”
“အင်း ကောင်းပါပြီ။ ကိုက ကိစ္စမရှိဘူး ဟန်နီက မိန်းကလေးဆိုတော့ အပြန်နောက်ကျမှာစိုးလို့ပြောတာ ကဲ ဒါဆို အဲ့ဒီနေ့အတွက် သေချာပြီနော်”
“ဟုတ်ပြီလေ ကို ပြန်တော့မယ် ညကျမှဖုန်းဆက်မယ်”
ဧက က ဟန်နီ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားတော့ ဟန်နီက လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်ကာ “အဆင်ပြေသွားတာ တော်ပါသေးရဲ့” ဟု တွေးလိုက်မိသည်။
စနေနေ့မနက်ပိုင်း ဟန်နီ့အလုပ်ကိစ္စပြီးမှ ဧက က သူ့ကားနှင့်လာကြိုပြီး ရန်ကုန်အထွက်နားမှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ မောင်းလာခဲ့သည်။
“မပင်ပန်းပါဘူး ကို… မနက်စောစောကတည်းက အချိန်မပေးနိုင်လို့ ဆောရီးနော်”
“ရပါတယ်ဟန်နီ… အဲ့ဒီ ဂေဟာက ကိုသွားနေကျလေ… ၁၈ နှစ်ပြည့်ကတည်းက စသွားခဲ့တာဆိုတော့ အခုဆို ၈ နှစ် ရှိပြီပေါ့… အဲ့ဒီဂေဟာက သာမန်မိဘမဲ့ဂေဟာမဟုတ်ဘူး ဟန်နီ… မွေးရာပါ AIDS ရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက် ပေးနေတာ မိဘတွေရဲ့ဆိုးမွေတွေကို ခံနေရတဲ့ကလေးတွေပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ကို အဲ့ဒီဂေဟာကိုပဲ အမြဲသွားဖြစ်ခဲ့တာ””
“အစတုန်းက မိဘမဲ့ဂေဟာကို လှူချင်လို့ လိပ်စာတွေလိုက်စုံစမ်းရင်းသိတာ.. တခြားမိဘမဲ့ကလေးတွေထက်သူတို့က ပိုပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ် ပိုပြီး လျစ်လျူရှုခံရတယ် ဘယ်သူမဆို ဂရုစိုက်ခံချင်ကြတာပဲမလား… အဲဒါကြောင့် ကိုက သူတို့ကို တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးချင်တာ… လတိုင်းလည်း အလှူငွေပို့ပေးတယ် မွေးနေ့ကျမှပဲသွားဖြစ်တာ… ကလေးတွေကို အစားအသောက်ကျွေးတာ ရေချိုးပေးတာတွေလည်း လုပ်ပေးလို့ရတယ် ဟန်နီစိတ်သန့်ရင်ပေါ့”
ဧက က ကားမောင်းနေရင်း ဟန်နီ့ကို ကျေးဇူးတင်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကာ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူဆုပ်ကိုင် ထားလိုက်သည်။
မိဘမဲ့ဂေဟာ၏ ဝင်းအကျယ်ကြီးထဲတွင် တည်ရှိပြီး မွေးစမှ ၃ နှစ်အထိကသီးသန့်ထားပြီး ၃ နှစ်အထက်ကလေးများကို ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး သီးသန့်တစ်ဆောင်စီခွဲထားသည်။ ဂေဟာ ဝင်ပေါက်ဝတွင် “ယနေ့အလှူရှင် ကိုဧကသု” ဟုရေးထားသော သင်ပုန်းကို မြင်ရသည်။ ဟန်နီတို့ ရောက်သွားသည့် အချိန်သည် နေ့လယ်စာစား ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီး ကလေးများကို ရေချိုးပေးကာ နေ့ခင်းသိပ်ပေးရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ အတန်းကြီး ကလေးများကတော့ ခဏနားပြီး စာကြည့်ရသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။
ရေချိုးပေးသည့်အချိန်တွင် ဧက က ယောက်ျားလေးများကို ကူချိုးပေးပြီး ဟန်နီက မိန်းကလေးများကို ကူချိုးပေးသည်။ ရေချိုးပြီးသည့်နောက် သနပ်ခါးလိမ်း၊ အဝတ်အစားလဲပေးပြီး ကလေးသိပ်သည့် အခါတွင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ကလေးများကို ထိန်းကျောင်းရင်း ပျော်ရွှင်နေသော ဧက ၏ပုံစံသည် တစ်ချိန်က ဟန်နီ့ ကိုကြမ်းတမ်းစွာပြုမူခဲ့ဖူးသည်ကိုပင် မေ့သွားလောက်အောင် နူးညံ့သိမ့်မွေ့လွန်းနေသည်။ ထိုပုံစံလေးကြောင့်ပင် ဟန်နီက စိတ်နာစရာကိစ္စကို မရှိခဲ့သလိုပင် သဘောထားကာ ဧက အပေါ် ပို၍ သံယောဇဉ်တွယ်မိလေသည်။
အဆာပြေမုန့်ကျွေးသည့်အချိန်နှင့် ညစာစားချိန်ကိုပါ ကူညီပေးပြီးမှပြန်လာသောကြောင့် ပြန်လာသည့်အချိန်တွင် မှောင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဧကက ကားကို သာမန်ထက်အရှိန်ပိုမြှင့်ပြီး မောင်းနေသောကြောင့် ဟန်နီက…
“ကို အရမ်းမြန်မြန်ကြီး မမောင်းနဲ့လေ”
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဟန်နီရဲ့ ကိုဂရုစိုက်မောင်းနေပါတယ်”
“ဟန်နီ့ကို မြန်မြန်ပြန်ပို့ပေးရမယ်လေ…အိမ်ပြန်နောက်ကျရင် သူများတွေ အထင်လွဲစရာဖြစ်မယ်မလား… ကိုတို့ရိုးရိုး သားသားသွားတဲ့ခရီးကို အဲ့ဒီလို လူတွေထင်ကြေးနဲ့ ညစ်ထေးအောင်လုပ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး… ပြီးတော့ ကိုနဲ့စိတ်မချတဲ့ ယမုံကလည်းမျှော်နေမယ်မလား… အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်မောင်းနေတာ”
“ဟန်နီကတော့ အဲ့ဒါတွေ သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး ကိုရယ်”
“ကိုလည်း ကို့အတွက်ဆိုရင် ဂရုမစိုက်ပါဘူး… ဟန်နီ့အတွက်ကြောင့် ဂရုစိုက်နေတာ ကိုက ဟန်နီ့ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ ဟန်နီ့အပြင် တခြားသူတွေကိုပါ သိစေချင်တာ”
ဧကရဲ့ စကားတွေကိုကြားတော့ ဟန်နီ့မှာ ဝမ်းသာကြည်နူးလွန်းလို့ မျက်ရည်ပင် ဝဲမိသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ချစ်သူကတန်ဖိုးထားတာ ခံရတာလောက် ဝမ်းသာစရာကိစ္စမရှိတော့။ ဧကမှာ ဒီလိုစိတ်ထားကောင်းလေးတွေရှိနေသည့်အကြောင်း ယမုံကိုပြောပြရဦးမည်ဟု ယမုံ့စိတ်ထဲ တေးထားလိုက်တော့သည်။ မမျှော်လင့်ထားသည်များကို မျက်လှည့်ပြသလို ဖန်တီးပြတတ်သော ကံကြမ္မာကိုတော့ ဟန်နီ သတိမပြုမိချေ…
ဟနျနီ့အတှကျကွောငျ့ ဂရုစိုကျနတော ကိုက ဟနျနီ့ကို တနျဖိုးထားတယျဆိုတာ ဟနျနီ့အပွငျ တခွားသူတှကေိုပါ သိစခေငျြတာ
ပွဿနာဖွဈပွီးနောကျပိုငျး ဧကနှငျ့ ဟနျနီ၏ ဆကျဆံရေးသညျ အရငျတုနျးကလိုပဲ ပွနျပွီး အဆငျပွပွေရှေိခဲ့သညျ။ ဧကကလညျး ဟနျနီ့ကို ဂရုတစိုကျရှိပွီး ဟနျနီကလညျး ဧက မကွိုကျသညျ့ကိစ်စမြားကို အတတျနိုငျဆုံး ရှောငျရှားခဲ့သညျ။ ယမုံကတော့ ဟနျနီ့ကို တားမရသညျ့အဆုံး အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့၍သာ နတေော့သညျ။ ထိုကဲ့သို့ သာမနျပုံစံအတိုငျး ဖွတျသနျးနရေငျး တဈနတှေ့ငျ ဟနျနီ့ရှုတငျရှိသညျ့နရောသို့ ဧက ကရောကျလာခဲ့ပွီး ရှုတငျ break သညျ့အခြိနျထိ စိတျရှညျစှာ ထိုငျစောငျ့နခေဲ့သညျ။
“ကို ရုတျတရကျကွီး ဘယျလိုရောကျလာတာလဲ”
“လာမယျ့ စနနေကေ့ ကို့ မှေးနေ့… အဲ့ဒီနကေ့ရြငျ ကို သှားနကြေ မိဘမဲ့ဂဟောကိုသှားပွီး မှေးနအေ့လှူလုပျမယျ.. အရငျနှဈတှကေတော့ တဈယောကျတညျးသှားနကေပြဲ.. အခုတော့ ဟနျနီနဲ့သှားခငျြတယျ အဲ့ဒီနကေို့ schedule လေးရှငျးပေး ထားဖို့””
“အငျး အဲဒီနကေ့… ခဏလေးနျော”
ဟနျနီကထိုငျနရောမှ ယမုံအနားကိုသှားပွီး စနနေေ့ schedule ကိုမေးကွညျ့လိုကျသညျ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၅)
“စနနေကေ့ campaign တဈခုအတှကျ သှားပေးစရာရှိတယျ ဒါပဲလေ ဘာလို့လဲ”
“အဲဒါကို cancel လုပျပေးလို့ရမလား ယမုံ… အဲဒီနကေ့ ကို့ မှေးနလေ့ေ သူနဲ့သှားစရာလေးရှိလို့”
ယမုံက ဧက ကိုလှမျးကွညျ့၍ မကျြစောငျးထိုးလိုကျပွီး..
“ဟနျနီ နငျသူ့အတှကျ အလုပျကို ထိခိုကျခံတော့မလို့လား…. campaign က တဈနလေုံ့းမဟုတျဘူးလေ.. မနကျပိုငျးလေးပဲကို ပွီးတော့မှ သှားလို့မရဘူးလား”
“အဲဒါဆို နောကျကသြှားမှာစိုးလို့ပါ။ သူ့မှေးနဆေို့တော့ သူစိတျခမျြးသာအောငျ လုပျပေးမလိုလေ.. နျော.. ယမုံ နျော… ”
“မှေးနမေ့ဟုတျလညျး နတေို့ငျး စိတျခမျြးသာအောငျ လုပျပေးနရေတာပဲ မဟုတျဘူးလား? နငျသူမကွိုကျတဲ့ကိစ်စတှေ သတိထားပွီး ရှောငျနတော ယောကျြားလေး အနုပညာရှငျတှကေို အရငျကထကျဝေးဝေး နနေတော ငါမသိဘူးမြား မှတျနလေား… နငျ့အလုပျကိုတော့ အထိခိုကျမခံစခေငျြဘူး။ campaign ပွီးမှသှားမယျလို့ နငျသှားညှိလိုကျပါ။ နငျရအောငျ မပွောရငျငါလိုကျပွောမှာနျော အဲ့ဒီကရြငျ ပွဿနာ အကွီးကွီးတကျလိမျ့မယျ”
“အေးပါ အေးပါဟာ… ငါပဲသှားပွောလိုကျပါ့မယျ နငျဒီမှာပဲနပေါ”
ဟနျနီက ဧက အနားကို ပွနျသှားပွီး…
“ကို အဲ့ဒီနကေ့ရြငျ မနကျပိုငျး campaign တဈခုသှားပေးဖို့ရှိတယျ အဲဒီကနအေပွနျ ကို နဲ့အတူတူ မှေးနအေ့လှူ သှားလုပျမယျလေ”
“ဒါဆိုရငျ အပွနျနောကျကလြိမျ့မယျနျော ဟနျနီ”
“ဒီတဈနညျးပဲရှိတယျ ကိုရဲ့… မနကျပိုငျး အစီအစဉျက ဖကျြလို့မရဘူး”
“အငျး ကောငျးပါပွီ။ ကိုက ကိစ်စမရှိဘူး ဟနျနီက မိနျးကလေးဆိုတော့ အပွနျနောကျကမြှာစိုးလို့ပွောတာ ကဲ ဒါဆို အဲ့ဒီနအေ့တှကျ သခြောပွီနျော”
“ဟုတျပွီလေ ကို ပွနျတော့မယျ ညကမြှဖုနျးဆကျမယျ”
ဧက က ဟနျနီ့ကိုနှုတျဆကျပွီး ပွနျသှားတော့ ဟနျနီက လပေူတဈခကျြမှုတျထုတျကာ “အဆငျပွသှေားတာ တျောပါသေးရဲ့” ဟု တှေးလိုကျမိသညျ။
စနနေမေ့နကျပိုငျး ဟနျနီ့အလုပျကိစ်စပွီးမှ ဧက က သူ့ကားနှငျ့လာကွိုပွီး ရနျကုနျအထှကျနားမှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ဂဟောသို့ မောငျးလာခဲ့သညျ။
“မပငျပနျးပါဘူး ကို… မနကျစောစောကတညျးက အခြိနျမပေးနိုငျလို့ ဆောရီးနျော”
“ရပါတယျဟနျနီ… အဲ့ဒီ ဂဟောက ကိုသှားနကေလြေ… ၁၈ နှဈပွညျ့ကတညျးက စသှားခဲ့တာဆိုတော့ အခုဆို ၈ နှဈ ရှိပွီပေါ့… အဲ့ဒီဂဟောက သာမနျမိဘမဲ့ဂဟောမဟုတျဘူး ဟနျနီ… မှေးရာပါ AIDS ရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတှကေို စောငျ့ရှောကျ ပေးနတော မိဘတှရေဲ့ဆိုးမှတှေကေို ခံနရေတဲ့ကလေးတှပေေါ့ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး ကို အဲ့ဒီဂဟောကိုပဲ အမွဲသှားဖွဈခဲ့တာ””
“အစတုနျးက မိဘမဲ့ဂဟောကို လှူခငျြလို့ လိပျစာတှလေိုကျစုံစမျးရငျးသိတာ.. တခွားမိဘမဲ့ကလေးတှထေကျသူတို့က ပိုပွီးခှဲခွားဆကျဆံခံရတယျ ပိုပွီး လဈြလြူရှုခံရတယျ ဘယျသူမဆို ဂရုစိုကျခံခငျြကွတာပဲမလား… အဲဒါကွောငျ့ ကိုက သူတို့ကို တခွားသူတှထေကျပိုပွီး ဂရုစိုကျပေးခငျြတာ… လတိုငျးလညျး အလှူငှပေို့ပေးတယျ မှေးနကေ့မြှပဲသှားဖွဈတာ… ကလေးတှကေို အစားအသောကျကြှေးတာ ရခြေိုးပေးတာတှလေညျး လုပျပေးလို့ရတယျ ဟနျနီစိတျသနျ့ရငျပေါ့”
ဧက က ကားမောငျးနရေငျး ဟနျနီ့ကို ကြေးဇူးတငျသညျ့မကျြလုံးမြားဖွငျ့ကွညျ့ကာ လကျတဈဖကျကို ဆှဲယူဆုပျကိုငျ ထားလိုကျသညျ။
မိဘမဲ့ဂဟော၏ ဝငျးအကယျြကွီးထဲတှငျ တညျရှိပွီး မှေးစမှ ၃ နှဈအထိကသီးသနျ့ထားပွီး ၃ နှဈအထကျကလေးမြားကို ယောကျြားလေး မိနျးကလေး သီးသနျ့တဈဆောငျစီခှဲထားသညျ။ ဂဟော ဝငျပေါကျဝတှငျ “ယနအေ့လှူရှငျ ကိုဧကသု” ဟုရေးထားသော သငျပုနျးကို မွငျရသညျ။ ဟနျနီတို့ ရောကျသှားသညျ့ အခြိနျသညျ နလေ့ယျစာစား ခြိနျပွီးသှားပွီဖွဈပွီး ကလေးမြားကို ရခြေိုးပေးကာ နခေ့ငျးသိပျပေးရမညျ့ အခြိနျဖွဈသညျ။ အတနျးကွီး ကလေးမြားကတော့ ခဏနားပွီး စာကွညျ့ရသညျ့အခြိနျ ဖွဈသညျ။
ရခြေိုးပေးသညျ့အခြိနျတှငျ ဧက က ယောကျြားလေးမြားကို ကူခြိုးပေးပွီး ဟနျနီက မိနျးကလေးမြားကို ကူခြိုးပေးသညျ။ ရခြေိုးပွီးသညျ့နောကျ သနပျခါးလိမျး၊ အဝတျအစားလဲပေးပွီး ကလေးသိပျသညျ့ အခါတှငျလညျး တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးခဲ့သညျ။ ကလေးမြားကို ထိနျးကြောငျးရငျး ပြျောရှငျနသေော ဧက ၏ပုံစံသညျ တဈခြိနျက ဟနျနီ့ ကိုကွမျးတမျးစှာပွုမူခဲ့ဖူးသညျကိုပငျ မသှေ့ားလောကျအောငျ နူးညံ့သိမျ့မှလှေ့နျးနသေညျ။ ထိုပုံစံလေးကွောငျ့ပငျ ဟနျနီက စိတျနာစရာကိစ်စကို မရှိခဲ့သလိုပငျ သဘောထားကာ ဧက အပျေါ ပို၍ သံယောဇဉျတှယျမိလသေညျ။
အဆာပွမေုနျ့ကြှေးသညျ့အခြိနျနှငျ့ ညစာစားခြိနျကိုပါ ကူညီပေးပွီးမှပွနျလာသောကွောငျ့ ပွနျလာသညျ့အခြိနျတှငျ မှောငျနပွေီဖွဈသညျ။ ဧကက ကားကို သာမနျထကျအရှိနျပိုမွှငျ့ပွီး မောငျးနသေောကွောငျ့ ဟနျနီက…
“ကို အရမျးမွနျမွနျကွီး မမောငျးနဲ့လေ”
“ဘာမှမဖွဈပါဘူး ဟနျနီရဲ့ ကိုဂရုစိုကျမောငျးနပေါတယျ”
“ဟနျနီ့ကို မွနျမွနျပွနျပို့ပေးရမယျလေ…အိမျပွနျနောကျကရြငျ သူမြားတှေ အထငျလှဲစရာဖွဈမယျမလား… ကိုတို့ရိုးရိုး သားသားသှားတဲ့ခရီးကို အဲ့ဒီလို လူတှထေငျကွေးနဲ့ ညဈထေးအောငျလုပျတာမြိုး မဖွဈစခေငျြဘူး… ပွီးတော့ ကိုနဲ့စိတျမခတြဲ့ ယမုံကလညျးမြှျောနမေယျမလား… အဲ့ဒါကွောငျ့မွနျမွနျမောငျးနတော”
“ဟနျနီကတော့ အဲ့ဒါတှေ သိပျဂရုမစိုကျပါဘူး ကိုရယျ”
“ကိုလညျး ကို့အတှကျဆိုရငျ ဂရုမစိုကျပါဘူး… ဟနျနီ့အတှကျကွောငျ့ ဂရုစိုကျနတော ကိုက ဟနျနီ့ကို တနျဖိုးထားတယျဆိုတာ ဟနျနီ့အပွငျ တခွားသူတှကေိုပါ သိစခေငျြတာ”
ဧကရဲ့ စကားတှကေိုကွားတော့ ဟနျနီ့မှာ ဝမျးသာကွညျနူးလှနျးလို့ မကျြရညျပငျ ဝဲမိသညျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျ ခဈြသူကတနျဖိုးထားတာ ခံရတာလောကျ ဝမျးသာစရာကိစ်စမရှိတော့။ ဧကမှာ ဒီလိုစိတျထားကောငျးလေးတှရှေိနသေညျ့အကွောငျး ယမုံကိုပွောပွရဦးမညျဟု ယမုံ့စိတျထဲ တေးထားလိုကျတော့သညျ။ မမြှျောလငျ့ထားသညျမြားကို မကျြလှညျ့ပွသလို ဖနျတီးပွတတျသော ကံကွမ်မာကိုတော့ ဟနျနီ သတိမပွုမိခြေ…
Tagged Dark side, Fiction Series, love, Possessive, psychology
Posted on March 14, 2018 Author Khine
ဘယ်သူက ဘာအလုပ်အကိုင်တွေလုပ်မယ်ထင်လဲ ယောင်းတို့?
သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် ဆိုကြသူများ (Bff)
Posted on February 1, 2017 Author Christina Rosy
Bff လို့အော်နေပေမယ့်လည်း ဒီလိုအချက်တွေ မလုပ်ဖူးသေးရင်တော့ bff မစစ်သေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေ ဆိုတာက ဂွကျလွန်းပြီး ပြောမနာဆိုမနာသူတွေပါ။ ရည်းစားမရှိရင်နေလို့ရတယ် ဒင်းတို့မရှိရင် နေလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကို Bff လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြပါတယ်။ Bff လို့အော်နေတိုင်း သူငယ်ချင်း အရင်းချက်ချွတ်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူး။ အခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေ လုပ်ဖူးမှသာ ၁၀၀ရာနှုန်းပြည့် ရေမရောတဲ့bff အစစ်ပါ။ ၁။မရွံတတ်။ ငတ်ပြတ်နေချိန်ဆို ပိုက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ လေးငါးယောက်သောက်ဖို့တောင်မရွံတတ်ကြပါဘူး။ ရောဂါကူးမှာ စိုးရိမ်ဖို့ဝေးစွ။ “ဟဲ့ကမ နင့်မှာ အီဘိုလာရှိလား။” “အေး။လုပ်မနေနဲ့ ပိုက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့သောက်တော့ နင်လည်းကူးသွားပြီ။” ၂။ ငိုအောင်လုပ်ဖူး။ Bff ဆိုသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းလုပ်တတ်သလို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်း လုပ်တတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပြသနာအိုးထဲကို အစိမ်းသက်သက်တွန်းချတာမျိုးကြောင့် ငိုဖူးတဲ့လူရှိမှာပါ။ ၃။ဘူးဖော်ဘူးဖက်။ ဟဲဟဲ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးကျတော့ ညှိယူစရာမလိုပါဘူး။ လမ်းသွားလို့ ကောင်လေး ချောချော […]
Posted on January 4, 2018 Author Khine
သားတော်မောင်က ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းလှမှတ်တယ် ဒီလိုဖေဖေရှိနေမှတော့ မထူးဆန်းပါဘူး
Introvert အချင်းချင်းသာ နားလည်နိုင်မယ့် အခက်အခဲ (၅) ခု
နေ့တိုင်းနီးပါးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုအရာတွေကို မွေးမြူရမလဲ?